को Chakras को विवरण र नाम - जानकारी मानिसहरू आफैलाई, आफ्नो शरीर र यसको क्षमताहरु बारेमा थप जान्न खोजिरहेका गर्न उपयोगी हुन्छ। मुख्य ऊर्जा केन्द्र, त्यहाँ मात्र सात छन्। यो तिनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो महत्त्व श्रेय। उनीहरूले जहाँ बारेमा यस लेखमा पढ्न सक्नुहुन्छ, के गठन, के तिनीहरूले छन्।
हामी के शक्ति केन्द्र को नाम र के तिनीहरूले के कुरा अघि, तपाईं यो छ भनेर बुझ्न पर्छ। शब्द "चक्र" "सर्कल", "पाङ्ग्रा" को रूपमा संस्कृत बाट अनुवाद। तदनुसार, ऊर्जा केन्द्र एक सर्कल को रूप मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन्। मानव शरीर मा Chakras कि के हो? तिनीहरूले ऊर्जा प्रवाह वितरण को एक क्षेत्र रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। तिनीहरूलाई नजिकै स्थित तथाकथित च्यानल क्षेत्रहरु - तिनीहरूले पत्रदल देखि विदा। सात ऊर्जा "पाङ्ग्राहरू", यसको midline साथ बढन मेरुदण्ड को आधार देखि सुरु र टाउको को मुकुट संग समाप्त, मानव शरीर मा घुमाइएको छन्।
सात प्रमुख Chakras
यस लेखमा पाठकहरूलाई प्रमुख मानिन्छ जो Chakras, उद्देश्य र नाम सिक्न मदत गर्नेछ। सात कुल। तिनीहरू सबै एक फरक रंगको विशेष व्यवस्था छ। अर्थ Chakras फरक। तथापि, तिनीहरू सबै लिङ्क छन्। लक एक केन्द्र ऊर्जा परिसंचरण को अवरोध गर्न जान्छ। यो नकारात्मक जीवन र एक व्यक्ति को राम्रो-जा असर गर्छ। तल छन् कि फोटो, तपाईं सात प्रमुख इन्द्रेणी विभिन्न रंग मा चित्रित "पाङ्ग्राहरू", को स्थान थाहा दिन्छ। साथै, लेखमा पछि स्लाव भाषाहरु र संस्कृत, तत्संबंधी विस्तृत विवरण Chakras को नाम हो। त्यसैले, जहाँ तिनीहरू र शक्ति "सर्कल" के हुन्?
को Chakras को नाम: Muldahara
Muldahara - यो मेरुदण्ड को आधार मा स्थित पहिलो प्रमुख चक्र। यो रातो मा चित्रित छ। यो संग यो Chakras को नाम सूची द्वारा सुरु गर्नुपर्छ छ। स्रोत - यो Slavonic भाषामा भनिन्छ रूपमा। यो "पाङ्ग्रा" पृथ्वी संग मानव सम्बन्ध सेट कि विश्वास छ।
Muldahara - चक्र, जो समर्थन छ, सबै मान्छे गर्नुपर्ने। यो सुरक्षा को अर्थमा लागि जिम्मेवार छ, एक व्यक्तिको रूपमा व्यक्ति पहिचान। यो पनि, यो संसारमा बच्न मद्दत गर्छ दिन्छ आत्म-संरक्षण को अन्त। चक्र सन्तुलित अवस्थामा छ भने, व्यक्तिगत विश्वास छ, महसुस शान्त। उहाँले सुरक्षित थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका थियो।
लक मानव डर को उपस्थिति, फिक्री गर्न जान्छ। यो पनि कम फिर्ता जस्तै अन्तस्करणले दुखाइ रूपमा अत्यधिक सम्भावित शारीरिक समस्या, छ। यो negativity उन्मुक्ति यसको उद्घाटन गर्न अनुमति दिन्छ। यो गर्न, एक व्यक्ति यो सबै सुखी जीवनको लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्न, एकाकीपनको भावना हटाउन हुनेछ।
Svadhisthana - तपाईं मानव Chakras को नाम सूची कुरा गर्न आवश्यक छ कि "पाङ्ग्रा" निम्न। उत्पत्ति - जस्तै Slavonic भाषामा यसको नाम हो। यो माथिल्लो किनारा बीच स्थित छ र गुप्तांग हड्डी को र नाइटो। स्कोप एक सुन्तला रंग छ। दोस्रो चक्र खुशी अनुभव गर्ने अवसर लागि मुख्य जिम्मेवार छ। मजा लागि प्रयास गर्न यसले मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, मनोरञ्जन।
Svadhishthana सन्तुलित अवस्थामा छ भने, एक व्यक्ति आफ्नो कार्यहरू रमाइलो गर्न, र एक परिणाम प्राप्त खातिर तिनीहरूलाई केवल बनाउन छैन सक्षम छ। व्यक्तिगत dissatisfaction एक सदैव अवस्थामा अवस्थित छ कारण अवरुद्ध, खुशी को स्रोतहरु लागि निरर्थक खोजीमा संलग्न छ। त्यहाँ जनन प्रभावित यस्तो पेट दुखाइ रूपमा शारीरिक लक्षण, रोग हुन सक्छ।
बरु केवल परिणाम गर्न खोजिरहेका भन्दा, प्रक्रिया को मजा अनुभव सिक्न गर्ने ती हुनेछ हराएको ब्यालेन्स बहाल। तपाईं निश्चित लागि सोख छ आनन्द ल्याउन कि गतिविधिहरु समय गर्नुपर्छ।
मानव Chakras को नाम र आफ्नो उद्देश्य मणिपुर बारेमा थाहा हुनुपर्छ रुचि भएकाहरूलाई। यसलाई मा स्थित छ सौर प्रतान, यो पहेंलो छ। पेट - त्यसैले यो स्लाव भाषाहरु मा उल्लेख "पाङ्ग्रा" छ। मणिपुर विश्वास को स्रोत हो। कि मानव जाति यसको बल सजग प्रतिनिधिहरु यसलाई अनुमति दिन्छ, यो अरूको इच्छा पालन गर्न, आफ्नै जीवन नियन्त्रण गर्ने क्षमता दिन्छ।
Slavonic मा Chakras नाम तपाईं आफ्नो गन्तव्य अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ। मणिपुर मालिक, उहाँले बनाउँछ भन्ने विकल्प पुस्तिका जो विश्वास को रुख लागि जिम्मेवार छ। त्यो सन्तुलित अवस्था छ भने, व्यक्ति त्यो ठ्याक्कै चाहन्छ थाह छ। उहाँले आफ्नो लक्ष्य परिभाषित र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम छ।
रुचि भएकाहरूलाई अरू के थाहा हुनुपर्छ मानव Chakras rapolozhenie र उद्देश्य यस लेखमा छलफल गरिएको छ जो? लक मणिपुर भन्ने मान्छे, दोषी को भावना भोगिरहेका छन् असम्भव कार्यहरू मा ले, को द्वन्द्वमा निरन्तर संलग्न छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। साथै, तिनीहरूले केहि परिवर्तन गर्न असमर्थ महसुस, अनन्त सिकार जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। यो अवस्था बाहिर मात्र तरिका - आत्म-सम्मान हुर्काउन। यो आत्म-विश्वास विकास गर्न झूटा STEREOTYPES, अरूलाई लगाएको विश्वास नत्याग्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
Anahata - अर्को "राउन्ड" जिज्ञासा चक्र व्यक्ति जगाउने गर्नेहरूलाई फेला पर्छ जो। स्थान यो एक गोप्य छ। यो हरियो रंग को sternum को बीचमा, छ। PERCY - एक स्लाव भाषाहरु नाम हृदय चक्र। Anahata को अहम् को जडान र मानिसको प्राण लागि जिम्मेवार छ। उनको Awakening ब्रह्माण्डको संग एकता को एक भावना सिर्जना गर्छ। यो आफूलाई जस्तै संतुलन छ भएका मान्छे। तिनीहरूले पनि दया विषय, अरूको भावनाको अनुभव गर्न सक्षम छन्। दुनिया एकता आनन्द अनुभव, साथीहरू र आफन्तहरूले आफ्नो जीवनमा उपस्थिति। को Chakras को नाम र आफ्नो अर्थ रुचि भएकाहरूलाई यसको महत्व सजग हुनुपर्छ।
यदि Anahata लक के हुन्छ? यस मामला मा, व्यक्ति अचाक्ली maudlin र भावुक बन्छन्। उहाँले अन्य निर्भर बन्न सक्छ। साथै, व्यक्तिगत छैन, आफैलाई प्रेम गर्न आफ्नो आवश्यकता को हेरविचार सक्षम छ। को likelihood unrequited आवेग को गरिब अनुहार उच्च छ। , प्रतिरक्षा गर्ने circulatory सिस्टम आफ्नो हृदय रोग, फोक्सो, साथै समस्या खतरामा। यो अवस्था बाहिर मात्र छ एक - तपाईं आफैलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ आफूलाई, आफ्नो उपलब्धिहरू गर्व हुन।
एक "पाङ्ग्रा" उल्लेख छैन, स्थान संग Chakras नाम सूची जारी। Vishuddha - फिक्का नीलो रङ, को घाँटी क्षेत्रमा स्थित को क्षेत्र। मुख - त्यसैले यो Slavonic भाषामा भनिन्छ। यो मान्छे आत्म-विकास लागि प्रयास बनाउँछ कि, रचनात्मकता लागि जिम्मेवार छ। "स्वतन्त्रताको ढोका" - यसको अनौपचारिक नाम हो कि। Vishuddha संतुलन को एक राज्य छ भने, एक व्यक्ति म धोका छैन यो आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नै विशिष्टताको बुझ्नुहुन्छ। उहाँले सिर्जना र निर्माण गर्ने इच्छा छ। उहाँले आत्म-बोध, आत्म-विकास सम्झौता गर्न aspires।
लक Vishuddhi हामी Chakras र आफ्नो अर्थ को नाम मा रुचि भएकाहरूलाई भूल गर्नुपर्छ के सबै यो मान्छे, deprives। तिनीहरू व्यक्त गर्ने क्षमता गुमाउन तिनीहरूले वरिपरि आफैलाई र मानिसहरूलाई झूठ गर्न सुरु गर्नुहोस्। उनि आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्न निरर्थक प्रयास द्वारा विशेषता छन्। यी मानिसहरू निरन्तर दृश्य को आफ्नो कुरा रक्षा, को द्वन्द्व संलग्न छन्। इमानदारी - शेष हासिल गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। उहाँले अरू कसैको बाटो फिट छैन भनेर, गर्दैन कुनै कुरा यो लाग्न सक्छ कसरी आकर्षक महसुस छ। उहाँले आफ्नै बाटोमा कदम आवश्यक छ। अभिव्यक्ति एक माध्यम फेला पार्न निश्चित हुनुहोस्।
Ajna - मानव Chakras र आफ्नो अर्थ को नाम लिए जो व्यक्तिहरूलाई खोज्न आवश्यक जो "पाङ्ग्रा", निम्न। Chelo (एक स्लाव भाषाहरु नाम) को निधारमा को बीचमा, नीलो रंग emits छ। यसको सक्रियता तपाईं साधारण परे जान ब्रह्माण्डको जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। मानिस विकसित अंतर्ज्ञान, को "तेस्रो आँखा।" खोल्न
को Ajna लक भने के हुन्छ? मान्छे अरूलाई भन्दा श्रेष्ठता गलत अर्थमा महसुस गर्न शुरू गर्दै छन्। तिनीहरूले विकास उच्च आत्म-सम्मान। तिनीहरूले soberly आफ्नो क्षमताहरु आकलन गर्न सक्षम छन् आफूलाई गलत छवि छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई उदाहरणका लागि, यो रक्सी हुन सक्छ, लागूपदार्थ, दुर्व्यसनहरूमाथि निर्भर बन्न सक्छ। तपाईं सबै को पहिलो खराब बानी विदाई भन्न पर्छ यो सक्रिय, शरीरमा एक विनाशकारी प्रभाव छ।
Sahasrara - रंग र नाम द्वारा Chakras बीच भेद गर्न चाहने ती फेला पार्न आवश्यक छ, जो पछिल्लो "सर्कल"। वसन्त (एक स्लाव भाषाहरु नाम) एक बैजनी रंग छ, को Parietal क्षेत्र मा स्थित छ। यो चक्र को ज्योति रोशनी लागि जिम्मेवार छ भनेर चिनिन्छ। यो एक व्यक्ति ईश्वरीय कुराकानी गर्न, ब्रह्माण्डको को बुद्धि थाह प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि Sahasrara अवरुद्ध, मान्छे ज्योति प्राप्त गर्न सक्दैन। तिनीहरूले टाउको दुखाइ ग्रस्त हुन सक्छ, तिनीहरूले एक मानसिक रोग विकास। साथै, malignancy निकाल्न छैन।
माथिको Chakras र आफ्नो स्थान को नाम हो। यो सबै रोगहरु एउटा तरिका वा अर्को ऊर्जा केन्द्र मा उल्लङ्घनको कारण मानिसहरू दु विश्वास छ। यो पनि एक लक "पाङ्ग्रा" अरूलाई मा असंतुलन को स्रोत बन कि रोचक छ। यो कारण थियो हिट को स्कोप के छ स्थापना गर्न त्यसैले आवश्यक छ।
आफ्नो उद्देश्य को वर्णन Chakras को नाम लिए गर्नेहरूलाई, अरू कुन कुरा याद गर्नुपर्छ? ऊर्जा केन्द्र गर्न क्षति लागि दोष को सबैभन्दा मानिस आफूलाई र वरपरका मानिसहरू मध्ये एक बन्दैछ। कसैको ठेगानामा curses pronouncing, यो एक भ्कगडा समयमा हुन्छ कसैले दुष्ट, अरूलाई क्षति देखाउने चाहनुहुन्छ। त्यसैले, मान्छे आफ्नो ऊर्जा केन्द्र को रोकावट रोक्न लाग्यो आफ्नो शब्द, तर पनि मात्र होइन नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। आखिर, यो नकारात्मक आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन प्रभावित हुनेछ।
Moles को अर्थ
"सेतो BIM काला कान": सारांश, उत्पादन को मूल्य
व्यञ्जनहरु। Lagman स्टेक र पोर्क
गोर जर्सी नस्ल: एक समीक्षा, एक विशेषता
घर मा सामन कसरी अचार गर्न